Daily Mail oo sharaxaad ka bixisay sababtii uu isku casilay Paul Scholes mudo bil gudaheeda. - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Daily Mail oo sharaxaad ka bixisay sababtii uu isku casilay Paul Scholes mudo bil gudaheeda.
Paul Scholes ayaa maalintii shalay aheyd iska casilay xilikii macalinimo ee uu ka haayay kooxda Oldham Athletic kadib 9kulan oo uu macalin u ahaa.
Scholes oo kooxda Oldham guul la gaaray kaliya kulankiisii ugu horeeyay ayaa lagu soo waramayaa inuu iska casilay kooxdaas kadib markii milkiilaha kooxda uu si joogto ah u faragashanayay arimaha kooxda cida la safayo iyo cida keyd noqon doontaba.
Sida wargeyska Dail Mail qoraayo Scholes ayaa mudadii bisha aheyd ee uu kooxda haayay dhibaato ku qabay madaxa kooxdaasi kaasoo si joogto ah usoo faragashanayay shaxda kooxda iyo iyadoo uusan baska kooxda markasta diyaar aheyn maadaama masuulka uusan Buska cayaartoyda qaado wax shidaal ah ku shubin xili xidigaha kooxda ay xitaa ku qasbanaadeen in maaliyadooda gacantooda ku dhaqdaan.
Sidoo kale Scholes ayaa aad uga ashtakooday shaxda kooxdiisa oo markasta si qarsoodi ah lagu gudbin jiray xili uu wacad ku maray inuu soo ogaan doono cayaaryahanka shaxda kooxda markasta bixiyo isla markaasna uusan mardambe kooxda u cayaari doonin.
Intaas kaliya kuma eka mid kamid ah cayaaryahanada ayaa loo fasaxay inuu tababarka ka maqnaado iyadoo waliba la ogeysiinin macalinka.
Sababahaas is biirsaday ayaa keentay in Paul Scholes xili hore iska casilo shaqada kooxda Oldham Athletic.